हात-खुट्टाको रंग कालो भयो ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, केही दिनमै हुनेछ गोरो र चम्किलो – Sandesh Press
हात-खुट्टाको रंग कालो भयो ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्, केही दिनमै हुनेछ गोरो र चम्किलो
July 4, 2021 525
काठमाडौँ । गर्मी मौसममा छाला कालो हुने समस्या धेरै हुन्छ । यो समस्या अनुहारका साथसाथै हात खुट्टामा पनि देखिन्छ। प्राय युवतीहरु यस्तो समस्यालाई वेवास्ता गर्छन्। जसका कारण हात र खुट्टाको छाला विस्तारै कालो हुन थाल्छ।
यो हेर्दा पनि निकै नराम्रो देखिन्छ। यसका कारण बजारमा विभिन्न क्रिम तथा लोशन पनि पाइन्छ। तर ती लोशन र क्रिममा हुने केमिकलले तपाईको छालामा झन अर्को समस्या देखिन बेर लाग्दैन्।
त्यसैले आज हामी तपाईलाई केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जसको प्रयोगबाट तपाई सजिलै हात खुट्टा तथा अनुहारको कालोपन हटाउन सक्नुहुनेछ। आज हामी तपाईलाई केही यस्ता घरेलु उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ। जसका माध्यमबाट तपाई सजिलै घामबाट कालोभएको छालालाई गोरो र चम्किलो बनाउन सक्नुहुनेछ । आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती उपायः
दहीः दही ल्याक्टिक एसिड पाइने गर्छ। जो छालाका लागि निकै फाइदाजनक हुने गर्छ। यसका लागि तपाई आवश्यकता अनुसार दही लिनुहोस् र घामले कालो भएको छालामा मसाज गर्नुहोस्। केही दिन यो उपाय फलो गर्नुभयो भने सजिलै तपाईको अनुहार, तथा हात खुट्टाको कालोपन हटेर जान्छ।
टमाटरः टमाटर छालालाई ग्लोइङ्ग बनाउनमा निकै उपयोगी हुन्छ। यसका लागि तपाई टमाटरको सानो टुक्रोलाई घामले कालो भएको छालामा ५ देखि ७ मिनेटसम्म रगडनुहोस्।
यदी तपाई चाहनुहुन्छ भने टमाटरलाई मसिनो गरेर मिन्नुहोस्। त्यसपछि त्यसमा १ चम्चा बेसार र १ चम्चा बेसनको पिठो मिलाउनुहोस्। त्यसपछि घामले कालो भएको छालामा १० मिनेट लगाएर चिसो पानीले धुनुहोस्। यसो गर्दा केही दिनमै तपाईले चमत्कारी लाभ पाउनुहुनेछ।
काक्रोः काक्रो घामले डढेको छालालाई रिमुभ गर्नमा निकै उपयोगी हुने गर्छ। यसमा पाइने भिटामिन ए स्किनको मेलेनिन उत्पादन कन्ट्रोलन गर्नमा निकै सहयोगी हुने गर्छ। यसका लागि तपाई काक्रोको रस निकाल्नुहोस्।
त्यसपछि तपाई यसलाई कपासको सहयोगले घामले डढेको छालामा १५ मिनेटसम्म लगाउनुहोस्। त्यसपछि सफा पानिले धुनुहोस् । यसो गर्दा पनि तपाईको घामले डढेको हात खुट्टा गोरो र चम्किलो देखिन्छ।
Prevसामान्य रुघाखोकी भनेर ढुक्क नबस्नु, डेल्टा भेरिएन्टका कस्ता कस्ता छन् लक्षण ?
Nextविटामिन बी १२ को कमी हुँदा शरीरमा देखिन्छ यस्तो लक्षण, कतै तपाईमा त छैन ?
शरीरको यी पाँच अंगमा कोठी हुने व्यक्ति हुन्छन साह्रै भाग्यमानी !